35 Ke kaloku uYakobi noYohane, oonyana bakaZebhedewu, beza kuye, besithi, Mfundisi, sithanda ukuba usenzele into esiyifunayo. 36 Wathi kubo, Yintoni eningathanda ukuba ndiyenzele yona? 37 Bathi kuye, Sinike thina ukuba sihlale, omnye ngakwesokunene sakho, omnye ngakwesokhohlo sakho, ngozuko lwakho.
38 Kodwa uYesu wathi kubo, Anazi into eniyicelayo; niyisela ntoni indebe endiyiselayo? kwaye ubhaptizwe ngobhaptizo endibhaptizwayo ? 39 Bathi kuye, Siyakwazi. Wathi uYesu kubo, Uya kuyisela indebe endiyiselayo; kwaye ngobhaptizo endiya kubhaptizwa ngalo, niya kubhaptizwa; 40 kodwa ukuba ndihlale ngakwesokunene sam nangasesandleni sam, kodwa kuya kunikwa kubo okulungiselelwe.
41 Bathi ke aba lishumi beva oko, baqala ukucaphukisa kakhulu uYakobi noYohane. 42 Kodwa uYesu wababizela kuye, wathi kubo, Niyazi ukuba abalawulwa beentlanga bayabalawula phezu kwabo; kwaye abaphathi babo basebenzisa igunya phezu kwabo. 43 Kanjalo akuyi kuba phakathi kwenu; kodwa ke ubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, uya kuba ngumlungiseleli wenu; 44 nabani na oya kuba yinduna, uya kuba ngumkhonzi wabo bonke. 45 Kuba noNyana woMntu akazange eze ukukhonzwa, kodwa ukukhonza, nokunikela ubomi bakhe ngentlawulelo yabaninzi.
Thelekisa : Mateyu 20: 20-28
UYesu kwiMandla neNkonzo
Kwisahluko 9 sabona abapostile baphikisana ngokuthi ngubani oza kuba "mkhulu" kwaye uYesu wabayala ukuba bangadibanisi ngokomoya ngobukhulu behlabathi. Kubonakala ukuba, abazange bamthobele ngenxa yokuba ngoku babini - uYakobi noYohane, abazalwana-bahamba emva kweminye yabo ukuze baqinisekise ukuba uYesu uza kubathembisa amabala amahle ezulwini.
Okokuqala, bazama ukwenza ukuba uYesu avume ukuba amenzele "nantoni" abayifunayo-isicelo esivulekile kakhulu sokuthi uYesu uhlakaniphile ngokwaneleyo ukuba angabi (ngenxa yoko, uMatewu unina unokwenza le sicelo - mhlawumbi ukukhulula uYakobi kwaye UJohn ngomthwalo walo msebenzi). Xa efumanisa ngokuqinisekileyo oko bafuna, uzama ukuzikhusela ngokubhekiselele kwiimvavanyo awaya kuzinyamezela- "indebe" kunye "nokubhaptizwa" apha akubhekiselekiyo ngokoqobo kodwa kunokuba zibhekiselele ekutshutshisweni nasekusebenziseni kwakhe.
Andiqinisekanga ukuba abapostile bayayiqonda into ayithethayo - akukona nje ukuba baye babonisa ukuqonda okukhulu kwixesha elidlulileyo-kodwa bafuna ukuba bazimisele ukuhamba nantoni na uYesu ngokwakhe uya kuhamba nayo. Ngaba zilungele ngempela? Oku akucaci, kodwa izimvo zikaYesu zinokuthi zibheke ukuba zibukeke njengesibikezelo sikaYakobi noYohn.
Abanye abaposhumi abapostile, ngokwemvelo, bacaphuke ngenxa yoko uYakobi noYohane bazama ukukwenza. Abayikuxabisa abazalwana abahamba emva kwabo ukuze baphumelele. Oku kusikisela, ndicinga ukuba akusiyo yonke into efanelekileyo kweli qela. Kubonakala ngathi abazange bafumane lonke ixesha kwaye kwakukho ukuphazamiseka okungazange kubhengezwe.
Noko ke, uYesu usebenzisa lesi sihlandlo ukuphinda isifundo sakhe sangaphambili malunga nendlela umntu ofuna ukuba "mkhulu" ebukumkanini bukaThixo kufuneka afunde ukuba "mncinci" apha emhlabeni, ekhonza abanye kunye nokubeka phambi komntu iimfuno kunye neminqweno. Akunjalo nje kuphela uYakobi noYohane ngokukhawulela ubuqaqawuli babo, kodwa abanye bahlwayelwa ngokuba nomona ngale nto.
Wonke umntu ubonisa iimpawu ezifanayo ezimbi, ngeendlela ezahlukeneyo. Njengangaphambili, kukho ingxaki ngohlobo lomntu oziphatha ngendlela echanekileyo ukuze athole ubukhulu ezulwini - kutheni ukuba baya kuvuzwa?
Le ngenye yezihlandlo ezimbalwa apho uYesu ebhaliweyo njengento enokuthetha ngayo ngamandla ezopolitiko-ngokuyinxalenye, uyabambelela kwimicimbi yonqulo. Kwisahluko 8 wathetha ngokuchasene nokulingwa 'ngumbingelelo wabaFarisi ... kunye nesigwele sikaHerode,' kodwa xa kuziwa kwizinto ezithile ehlala ejolise kwiingxaki zabaFarisi.
Nakhu, ke, uthetha ngokukhethekileyo "inkawo kaHerode" - ingcamango yokuba kwihlabathi lezopolitiko lendabuko, yonke into iphathelele ngamandla kunye negunya. NoYesu ke, kunjalo, malunga nenkonzo kunye nokukhonza. Ukuhlaziywa okunjalo kweendlela zamasiko zezopolitiko kuya kuba yinto echasayo kwezinye iindlela ezenziwe ngayo iicawa zobuKristu. Kukho, nathi sihlala sifumana "abakhulu" abasebenzisa igunya "kwabanye.
Phawula ukusetyenziswa kwegama elithi "intlawulelo" apha. Iigatshana ezinjengalezi ziye zanikela kwi-"intlawulelo" yolu sindiso, ngokutsho kukaYesu ukusindiswa kwegazi ngenxa yezono zobuntu. Ngokwemvo, uSathana uye wavunyelwa ukubusa phezu kwemiphefumlo yethu kodwa ukuba uYesu uhlawulela "intlawulelo" kuThixo njengombingelelo wegazi, iinqwelo zethu ziya kupheliswa.
Jikelele uGeorge Marshall: oyiNtloko yeSebe lase-US e-WWII
Uluhlu lweAlfabhethi lwazo zonke iiAfrika
'Ngenye indlela' ngokubhekiselele 'Ngexesha elithile' - Amazwi adibanisekile ngokuqhelekileyo
Ukudala indawo engcwele
Ukuhluleka koMongameli we-19 weXesha leMinyaka
Umzekelo wokuxhaswa komlinganiso Inkinga
I-Pokemon Ixesha le-14: I-Pokemon Emnyama ne-White
Umthetho weMali we-1764
UMethusela - Umntu Omdala Kunabo Bonke Owake Waphila
'Ukubaluleka kokuQeqesha' amaCwecwe
ULindsay Lohan, iMedia kunye ne-Fallen Marines